SOO SAARAHA - Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Shenxian Shuiyuan Teknolojiyadda Tamarta Cusub Co., Ltd. oo la aasaasay 2000, oo ku taal gobolka Shandong, waxaan nahay warshad soo saare oo ku takhasustay soo saarida Dibenzoylmethane (DBM) iyo furfural. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah wax soo saarka xirfadeed ee ugu weyn adduunka Dibenzoylmethane (DBM) oo leh awood sanadle ah 10,000 metrik ton, iyada oo ah mid ka mid ah soo saaraha xirfadleyda ugu weyn adduunka furfural lehna awoodda sanadlaha ah 30,000 metrik ton. Waxaan leenahay afar warshadood.
Waa warshad ka kooban 83,916 mitir laba jibbaaran oo ay ku jiraan 80,000 mitir murabac oo aqoon isweydaarsi.Company waxay leedahay in ka badan 200 shaqaale, xoog farsamo xoog leh, waxay leedahay xirfadle ku howlan cilmi baarista wax soo saarka cusub iyo kooxda farsamada horumarinta, iyo wadashaqeyn dhow oo lala yeesho machadyo badan oo cilmi baaris caan ah oo gudaha ah. , Waxaan u hoggaansameynaa fikradda hal-abuurka sayniska iyo farsamada iyo ilaalinta deegaanka ee cusub ee aan sunta ahayn ee PVC kuleyliyaha xasilinta kuleylka Dibenzoylmethane (DBM) iyo furaldehyde iyo wax soo saarka furfural iyo wax soo saarka shirkadda iibka awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee 40,000 tan, shirkaddu waxay leedahay wax soo saarka tikniyoolajiyadda casriga ah. khadadka iyo qalabka wax soo saarka Dibenzoylmethane (DBM) ee ugu weyn adduunka, tayada wax soo saarku waxay gaadhay heer caalami oo heer sare ah.
Waxyaabaha badanaa loo isticmaalo methanol iyo acetic acid ka soo baxa miraha hadhuudhka, oo loo isticmaalo wax soo saarka Dibenzoylmethane iyo furfural, noocyo badan oo adeegsi ah, badanaa loogu talagalay daawada cusbada dhogorta aalkolojiga ah iyo warshadaha kiimikada wanaagsan ee aagagga. Wax soo saarka dabiiciga ah waxaa loo isticmaali karaa soo saarista daawooyinka, aalkolada furfuryl, dhir udgoon, dhadhan, resins iyo alaabooyin kale.
Dibenzoylmethane waxaa badanaa loo isticmaalaa inuu yahay xasiliyaha balaastigga ah ee mashiinka biyaha lagu shubo, noocyada faleebada, tuubooyinka leexashada, iwm. Waqtigan xaadirka ah, oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo dhan 10,000 tan, In ka badan 95% waxsoosaarka ayaa loo dhoofiyaa Mareykanka, wadamada Yurub, South Korea, Japan, Britain, Mexico, iwm Waxaan ku leenahay macaamiil in ka badan 40 dal. Shirkadayada waxay noqotay hogaamiye Dibenzoylmethane iyo warshadaha dhogorta ee Shiinaha